ဖုန်းထဲမှာ APP အများကြီးမသုံးဖြစ်ဖူးဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင်ဟိန်းဝေယံ – DigitalTimes
ဖုန်းထဲမှာ APP အများကြီးမသုံးဖြစ်ဖူးဆိုတဲ့ သရုပ်ဆောင်ဟိန်းဝေယံ
ပထမဆုံးဒါရိုက်တာအဖြစ် ရုပ်ရှင်ကားရိုက်ကူးနေတဲ့ သရုပ်ဆောင်ဟိန်းဝေယံ ဆီ ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုဟိန်းဝေယံနဲ့ဆုံတုန်း သူရဲ့အနုပညာလှုပ်ရှားနဲ့ ဖုန်းအကြောင်းကို မေးဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
Q. အခုအစ်ကိုရိုက်နေတဲ့ ဇာတ်ကားလေးအကြာင်း ပြောပြပေးပါလား။
ဒီဇာတ်ကားလေး နာမည်က မာယာကကြိုး ကျွန်တော်စဉ်းစားထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပါ။ အဓိက ဒီဇာတ်လမ်းမှာပါဝင် သရုပ်ဆောင်ကျတာက ဇေရဲထက်၊ ရတနာဗိုလ်၊ အန်တီမေသန်းနု၊ အန်တီ မေသဉ္ဇာဦးနဲ့ တခြားအနုပ ညာရှင်တွေလည်း ပါဝင်အားဖြည့်ထားပါတယ်။ ဒီကားလေးက ကျောင်းကို အခြေခံထားတဲ့ အချစ်ဒရမ်မာ ဇာတ်လမ်းလေးပါ။
Q. ဒီဇာတ်ကားက အစ်ကို ဒါရိုက်တာလို့ သိရပါတယ်။ ဒါရိုက်တာ အဖြစ် ရိုက်ဖြစ်ပုံကို ပြောပြပေးပါလား။
ဒီဇာတ်လမ်းလေးကို ကျွန်တော်သဘောကျတယ်။ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ပုံဖော်ပြီးကြိုးစား ရိုက်ကြည့်ချင်တယ်။ အဲဒီအတွက် ကြိုးစားဆုံးဖြတ်ပြီး လုပ်နေတာပါ။
Q. ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ကိုယ်တိုင်လည်း ပါဝင် သရုပ်ဆောင်ထားတာတွေ့ရတယ်။ အစ်ကိုကာရိုက်တာ လေးကို ပြောပြပေးပါလား။
ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လူငယ်ကာရိုက်တာ လေးပါပဲ။
Q. ဒီကားက အစ်ကို ပထမဆုံး ဒါရိုက်တာလုပ်တဲ့ ဇာတ်ကားလို့ သိရပါတယ်။ အတွေ့အကြုံနဲ့ အခက်အခဲတွေ ပြောပြပေးပါလား။
အခက်အခဲကတော့ မရှိပါဘူး။ ပါဝင်တဲ့သူအားလုံးက ကြိုးစားပြီးလုပ်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ ပုံမှန်ထက်ကို သုံးဆလောက် ပင်ပန်းတယ်။ ဒီကားက ကျွန်တော်အနေနဲ့ ပထမဆုံး ဒါရိုက်တာအဖြစ် ရိုက်တဲ့ဇာတ်ကားလည်းဖြစ်တယ်။ ရုပ်ရှင်ကားကြီးလည်း ဖြစ်နေတဲ့အ တွက် အတတ်နိုင်ဆုံး ကြိုးစားပြီးလုပ်နေပါတယ်။
Q. ေနာက်ထပ်ရောဒါရိုက်တာအနေနဲ့ ဇာတ်ကားတွေရိုက်သွားဖို့ ရှိသေးလား။
ကျွန်တော် အရမ်းကြိုက်တဲ့ ဇာတ်မျိုး၊ ကျွန်တော် အရမ်းရိုက်ချင်တာမျိုး ဆိုရင် ကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ် သွားမှာပါ။ ကျွန်တော်ဦးစားပေးကတော့ သရုပ်ဆောင်ပါ။ ဒါရိုက်တာအနေနဲ့က ကျွန်တော် ရိုက်ချင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းမှ ရိုက်ဖြစ်မှာပါ။
Q. ဒီကားပြီးရင် ဘာတွေလက်ခံထားသေးလဲ။
ဒီကားပြီးရင် ရုပ်ရှင်ကားတွေ၊ဗီဒီယိုတွေ ရိုက်ဖို့လက်ခံထားပါတယ်။
Q. အခု ရတနာပုံဇာတ်လမ်းတွဲလေး တီဗီမှာလွှင့်နေပြီ။ နောက်ထပ်ရော ဇာတ်လမ်းတွဲ ရိုက်ဖို့ရှိသေးလား။
ကျွန်တော်တို့ မာန်ထက်ချီကနေ ဇာတ်လမ်းတွဲရိုက်ဖို့ စီစဉ်ထားတာရှိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သေချာတော့မပြောနိုင်သေးဘူး။ စီစဉ်တော့ စီစဉ်ထားပါတယ်။
Q. ဒါရိုက်တာပိုင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လိုလေ့လာဖြစ်လဲ။
ကျွန်တော ရိုက်ကွင်းပေါ်မှာ လေ့လာတယ်။ လက်လှမ်းမှီသလောက် မြန်မာကား၊နိုင်ငံခြားကား အကုန်ကြည့်တယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ တစ်နှစ်လောက်ကတည်းက လေ့လာခဲ့တာပါ။ ကျွန်တော်သိသလောက် တတ်သလောက်လေးနဲ့ လုပ်ကြည့်နေတဲ့သဘောပါ။
Q. အခုအစ်ကိုဘယ်ဖုန်း Brand ကိုင်ထားလဲ။
Q. ဖုန်းကိုအစ်ကိုရဲ့တစ်နေ့တာမှာ ဘာတွေသုံးဖြစ်လဲ။
ဓာတ်ပုံရိုက်တယ်။ အင်တာနက် သုံးတယ်။ အခုတော့ ကျွန်တော် Facebook လော့ကျသွားလို့ မသုံးဖြစ်ဘူး။ ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ ဗီဒီယိုကားတွေကို ဒေါင်းလော့ လုပ်တယ်။ သီချင်းနားထောင် ဖြစ်တယ်။
Q. ဖုန်းထဲမှာ သုံးဖြစ်တဲ့ APP တွေပြောပြပေးပါလား။
ကျွန်တော် ဖုန်းထဲမှာ APP တွေသိပ်မရှိဘူး။ ဖုန်းထဲမှာ လိုတာတွေ လောက်ပဲရှိတယ်။ APP တွေ အများကြီး မသုံးဖြစ်ဘူး။
Vivo က 20MP Selfie Camera ပါတဲ့ V5s ကို မိတ်ဆက်
၂၀၂၀ ခုနှစ်မှာ တက္ကစီ ကားပျံများကို စမ်းသပ်မယ့် Uber